7 Ho any amin'ireo toerana natokana ho any Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Ho any amin'ireo toerana natokana ho any Europe
Ny fitsangatsanganana sy ny fahitana toerana vaovao dia manome elatry ny nofinay, sahy, ary mianara. Amin'izao tontolo midadasika be izao, Saika tsy ho afaka hahita ny zava-drehetra, ary tsy azo atao ny miaina sy mankafy ny toerana rehetra any Eropa. Miaraka amin'ireo toerana mahaliana maro, ianao irery no afaka manonofy hahita azy rehetra. Raha tena maniry ny hankafy toy ny eo an-toerana ianao ary mivelatra amin'ny làlana vaovao, avy eo manana 7 miavaka amin'ireo lalan-tany nokapohina mba hahitanao.
Avy any Frantsa ka hatrany Suisse, 7 velaran-tany iainan'ny bibidia, farihy milamina, ary ireo lapa voatahiry dia miandry ny ho lasa ao amin'ny sarin'ny sarinao amin'ny fialan-tsasatra indrindra tsy hay hadino any Eropa. Noho izany, alao ny fonosana maivana ary ho vonona hiara-mitondra afa-tsy ireo fahatsiarovana sy tantara miaraka aminao, rehefa manomboka amin'ny zava-baovao, ary mandehana amin'ny lalana tsy dia lavitra.
1. Ho any amin'ireo toerana natokana ho an'ny lalana: Occitanie, Frantsa
Nofehezin'ny Ranomasina Mediterane sy ny tendron'ny Pyrenees, mahavariana ny faritra Occitanie Atsimo any Frantsa. Trano misy tanàna mimanda, Toulouse mahafinaritra, tora-pasika, sy ny divay, ity faritra frantsay ity dia mahavariana sy manaitra ny lalana nodiavina any Eropa mba hametraka ambony amin'ny lisitry ny vatao.
Somary hafa noho ny frantsay Riviera sy Paris i Occitanie, misaotra ny hafainganam-pandeha malefaka sy fohy. Noho izany, azonao atao ny maka fotoana handinihanao ny firenena Cathar sy ireo momba azy, anisan'izany ny Carcassonne mahavariana. Raha tianao ny hetsika ivelan'ny any ivelany toy ny fitsangantsanganana na rafting, avy eo dia Gorges du Tarn canyon sy Cevennes National Park dia tsara. The valan-javaboary dia tahirin-java-miafina UNESCO, ary iray amin'ireo valan-javaboary folo ao Frantsa.
Azonao atao ny mametraka ny tranonao any an-drenivohitra mavokely sy manintona, Toulouse, na ilay tanàna manintona ao Albi. Samy mahafinaritra ireo làlana amin'ny lalana nokapohina vaky ny tanàna any Frantsa ary fitsangatsanganana lava kokoa Fialantsasatra frantsay. Afaka tonga soa aman-tsara any Toulouse ianao amin'ny fitsangatsanganana lamasinina avy any Paris sy Barcelona teo ho eo 5 ora.
Lyon mankany Toulouse amin'ny lamasinina
Paris mankany Toulouse amin'ny lamasinina
Tsara amin'ny Toulouse amin'ny lamasinina
Bordeaux mankany Toulouse amin'ny lamasinina
2. Hallstatt, Aotrisy
Hallstatt vohitra dia tanàna tonga lafatra sary izay hita eo amin'ny Farihin'i Hallstatt. Amin'ny lohataona, latsaka, na ririnina, paradisa tena izy amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, manolotra hetsika ivelan'ny trano be dia be ho an'ireo mpizahatany adrenaline. Na ny mifanohitra amin'izay, raha manonofinofy ny fikoropanana eo amoron'ny farihy misy veromanitra iray na mitaingina sambo manodidina ny farihy, Hallstatt no toerana mety indrindra.
izany toerana mahafinaritra nahavita izany ho antsika 7 eny amin'ny lalana nodiavina any amin'ny lisitr'ireo lalana eoropeana noho ny lava-bato mahery, farihy manga kristaly, ary ny Lohasaha Echern miaraka amin'ny azy mahatalanjona hevitra sy lalana. Tsy lazaina intsony ny, fa izao dia efa nahitan'ny tontolo hafa.
Hallstatt dia 3 adiny iray miala an'i Vienna amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana lamasinina. Ary noho izany, raha mila fialan-tsasatra tsy hay hadinoina any amin'ny tany mahavariana any Aotrisy ianao, ary tena zava-dehibe manalavitra ny valalabemandry, avy eo Hallstatt no tonga lafatra mankany amin'ny lalana aleha.
Munich mankany Hallstatt amin'ny lamasinina
Innsbruck mankany Hallstatt amin'ny lamasinina
Passau to Hallstatt amin'ny lamasinina
Rosenheim mankany Hallstatt amin'ny lamasinina
3. Ho any amin'ireo toerana natokana ho an'ny lalana: Haarlem, The Netherlands
Kely tsy fantatra noho ny mpiara-monina aminy Amsterdam sy Rotterdam, Haarlem no tsara indrindra an-tanàna voadaroka any Holandy. ihany 18 minitra miala an'i Amsterdam amin'ny lamasinina, Ny hatsaràn'i Haarlem dia hanintona anao mandritra ny faran'ny herinandro farafahakeliny.
Lova medievalie ao an-tanàna, fanahy feno rivotra sy rivodoza, mamorona rivo-piainana mahavariana. Raha te-hahita an'i Holandy amin'ny fiteny holandey marina ianao, dia mandehana amin'ny arabe tery, hatramin'ny Grote Markt. dia, manakatra kodiarana mifono rivotra, Ny fikosoham-bary Adriaan, ho an'ny fijery mahavariana ny tanàna sy ny renirano.
Fomba iray lehibe hampiasana ny fialan-tsasatrao any Haarlem ny fitsidihana ireo labiera tranainy indrindra. Miverina ao 1620, Ery 100 breweries, ary anio dia mbola afaka manandrana ny sasany amin'ireo fanao taloha. Tsara Kokoa, aorian'ny fitsidihana ny iray amin'ireo tranom-bakoka marobe ao an-tanàna, ary misy tranom-bakoka misimisy kokoa tany Haarlem noho ny tanàna Holandey hafa.
Hamaranana, ity tanàna misy lalana voadaroka ity vatosoa miafina any amin'ireo firenena malaza indrindra any Eropa ary mendrika ny fitsidihana tanteraka!
4. Farihy Orta, Italia
Ny ankamaroan'ny mpizahatany mandehandeha any Italia mba hanandrana italiana nahandro ary mankafy ny tsy ankasitrahan'ny fiainana, tahaka ny ataon'ireo eo an-toerana. Na izany aza, misy any Italia kokoa noho ny mitsoka a vera divay miaraka amin'ny pasta vaovao. Farihy Orta ao amin'ny faritry ny farihy dia toerana manaitra sy tantaram-pitiavana. Niafina miafina teo anelanelan'ny tendrombohitra, ary nisaraka tamin'ny Lake Maggiore malaza nataon'i Monte Mottarone, Mendrika ny fiankohofana tanteraka ny Lake Orta, ary fotoana hianarana an'i Italia eo amin'ilay lalana nokapohina sy ny hafainganam-piainana milamina.
From tongotra lavitra lalana, mitaingina sambo, divay eo amoron'ny farihy, sy milomano, Ny Lake Orta dia vatosoa italianina iray mahafinaritra, izay mbola hitan'ny mpizahatany izany.
Ny Lake Orta dia lamasinina mandritra ny adiny roa avy ao Milan, ary 5 ora avy ao Zurich amin'ny alàlan'ny fijery mahafinaritra amin'ny Alps.
5. Ho any amin'ireo toerana natokana ho an'ny lalana: Bohemia, Repoblika Tcheky
Ora vitsy monja manjavozavo amin'i Prague, tanin'ny angano sy faritra mahafinaritra. Ny zandarimariam-pirenena ao Bohemian Suisse, Zavamaniry nasionaly Czech Svycarsko, dia eo amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Alemana. Pravcicka Brana, fananganana vatolampy mahavariana, rano miboiboika, sy ny fitsangatsanganana an-tongotra maro, dia fitsangatsanganana lavitra kely lavitra an'i Decin, ny tanàna akaiky indrindra.
Iray tahiry lehibe hafa any an-tokotany manaitra i Kladska Tahiry voajanahary. Misy làlana mahafinaritra mankany amin'ny farihy, ary tena manaitra ny fahalavoana amin'ny fararano. fa, raha tianao kokoa ny tanàna kely sy chateaux, dia ho tianao ny neo-Gothic Hluboka Chateau.
6. Antwerp, Belzika
Amin'ny bisikileta na tongotra, Antwerp mampientam-po sy manentana. Ny tanàna faharoa lehibe indrindra any Belzika, Antwerp dia tena tsikaritry ny mpizahatany. Na izany aza, mahavariana amin'ny lalana nokapohina tany Eropa izy ity ho an'ny fahafinaretana fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro.
Mizara roa ny tanàna 3 faritra: tanana haolo, atsimo, sy ny seranan-tsambo, izay trano amin'ireo kolontsaina sy olona samihafa manerana an'izao tontolo izao. Ary noho izany, dia lanitra misolo tena azy io, manompo izay rehetra irin'ny fonao. Museums, Tsena lehibe, katedraly, mpamorona lamaody famoronana endrika ambony indrindra, adiny iray monja miala ny renivohitra, lamasinina.
Noho izany, raha maniry ny diamondra anao indrindra avy amin'ny foibe fivarotana diamondra be indrindra ianao, tia sôkôla, ary miantsena, tsy maintsy ilaina io lalana nokapohina io.
Brussels mankany Antwerp amin'ny lamasinina
Amsterdam mankany Antwerp amin'ny fiaran-dalamby
Lille mankany Antwerp amin'ny Train
Paris mankany Antwerp amin'ny lamasinina
7. Ho any amin'ireo toerana natokana ho an'ny lalana: Lucerne, Soisa
Ny filaharana tonga lafatra amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana mpifankatia any Switzerland, Mahafinaritra i Lucerne. Mandeha amin'ny farihy, mijery ny Tendrombohitra Pilatus sy ny Tendrombohitra Titlis paty ny oram-panala no hita taratra ao anaty rano, tsy misy mpizahatany manodidina, nofinofin'i Soisa.
Love be Lucerne tena tsara ho an'ny andro-nivezivezy amin'ny Alps, ary mbola hitan'ny mpandehandeha. Noho izany, hahazo tombony tsy misy vidiny ianao hahafinaritra azy sy handinika an'i Switzerland amin'ny lalan'ny voadaroka. Mandehana amin'ny lalana Dragon ary mizaha toetra ny herinao eo amin'ny zaridain-tady, izay hetsika ivelany tsara indrindra manodidina an'i Lucerne.
Ao amin'ny sisin'ny Alps ao amin'ny sisin-tanin'i Soisa-Alemanina, Tsy hay hadinoina i Lucerne amin'ny lalana nokapohina tany Eropa. Lucerne dia vatosoa miafina ao afovoan'i Soisa ary jfiaran-dalamby ao amin'ny seranam-piaramanidina soisa.
Zurich mankany Lucerne amin'ny fiaran-dalamby
Bern ho an'i Lucerne amin'ny fiaran-dalamby
Geneva mankany Lucerne amin'ny fiaran-dalamby
Konstanz mankany Lucerne amin'ny lamasinina
Hamaranana, Feno fahagagana i Eropa, angano, zava-miafina, sy ny voajan'ny mpizahatany. Raha maniry fanandramana niavaka ianao ary mahatsapa ireo firenena lehibe indrindra eto Eoropa. Na izany aza, raha te-handeha ianao, tahaka ny ataon'ireo eo an-toerana, avy eo ianao dia ao anatin'ny fotoana iray mahavariana amin'ny toerana voatokana voalaza etsy ambony.
eto amin'ny Save A Train, dia ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila fiaramanidina mora indrindra indrindra amin'ireo làlana manokana amin'ny lisitra misy anay.
Te-hametaka ny pejinay bilaogy “7 Akan'ny Toeram-pivarotana any Europe” ianao ao amin'ny tranonkalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/off-beaten-path-...tinations-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / izany / en na / en sy ny maro hafa fiteny.
Anvers citybreakeurope offbeatenpath offthebeatenpath Train Travel traintravelaustria traintravelfrance travelitaly travelswitzerland